Bit By Bit - Ịjụ ajụjụ - 3.6.1 arịọsi ike
Site n'inwe ajuju, data nyochaa na-eme ka ihe gbara gburugburu gburugburu nnukwu data data nwere ụfọdụ ihe dị mkpa mana enweghi ndị ọzọ.
Otu ụzọ isi jikọta data nyocha na nnukwu data data bụ usoro nke m ga-akpọ enriched na-arịọ . N'ịchọsi ike na-arịọ, nnukwu data data nwere ụfọdụ ihe dị mkpa ma enweghi ihe ndị ọzọ ya mere onye nyocha ahụ na-anakọta ihe ndị a na-efu na nyocha ma mesịa jikọta isi mmalite data abụọ ahụ. Otu ihe atụ nke ịrịọ ajuju bụ ihe Burke and Kraut (2014) gbasara banyere ma mmekọrịta na Facebook na-eme ka ọbụbụenyi ike, nke m kọwara na mpaghara 3.2). N'ọnọdụ ahụ, Burke na Kraut jikọtara data nchọpụta na data ndekọ data Facebook.
Otú ọ dị, ebe Burke na Kraut na-arụ ọrụ, Otú ọ dị, ọ pụtara na ha enweghị nsogbu abụọ ndị na-eme nchọpụta na-eme ka ọ baa ọgaranya na-arịọkarị ihu. Nke mbụ, n'ezie ịjikọta ihe ndekọ data nke onye ọ bụla, usoro a na-akpọ njikọ ndekọ , nwere ike isi ike ma ọ bụrụ na enweghi ihe nchọpụta pụrụ iche na isi mmalite data nwere ike iji mee ihe iji hụ na ndekọ ziri ezi na otu dataset dabara na ndekọ ziri ezi na dataset ọzọ. Nsogbu abuo abuo n'inwe ajuju bu na ogo nnukwu ihe omuma data ga-esi ike mgbe otutu ndi oru nyocha ichoputa n'ihi na usoro nke eji kee ya nwere ike buru ihe kwesiri ya ma nwee ike ibute otutu nsogbu di na isi 2. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ịrịọ arịrịọ bara ụba na-agụnyekarị njehie-na-ejikọ njikọ nke nyocha na ihe ntinye data ojii na-amaghị. N'agbanyeghị nsogbu ndị a, Otú ọ dị, a pụrụ iji ịrịọ arịrịọ bara ụba mee nchọpụta dị mkpa, dịka Stephen Ansolabehere na Eitan Hersh (2012) na nyocha ha banyere usoro ntuli aka na United States.
Ndi nhoputa ndi nhoputa ndi ozo bu ihe omumu nke nyocha omumu nke ndi sayensi, na, n'oge gara aga, ndi nyocha ndi mmadu banyere ndi nhoputa na ihe kpatara eji eme ka nyocha ihe omumu. Otú ọ dị, ịtụ ntụrụndụ na United States bụ àgwà na-enweghị isi na akwụkwọ gọọmentị na-edekọ ma nwa amaala ọ bụla egosipụtara (n'ezie, gọọmentị adịghị edekọ onye ọ bụla n'ime ụmụ amaala ga-eji aka ya mee). Ruo ọtụtụ afọ, akwụkwọ ndekọ ntuli aka ndị a dị na ụdị akwụkwọ, gbasaa n'ọfịs gọọmentị dị iche iche na obodo ahụ. Nke a mere ka o sie ike, ma ọ gaghị ekwe omume, maka ndị ọkà mmụta sayensị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ga-ahụcha ihe niile ndị mmadụ na-ekwu na nyocha banyere ịme ntuli aka na (Ansolabehere and Hersh 2012) ntuli aka ha (Ansolabehere and Hersh 2012) .
Ma ugbu a, a na-edekọ akụkọ ndekọ ntuli aka a, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ejirila nchịkọta nchịkọta ma jikọta ha iji mepụta faịlụ ndị nchịkwa nchịkwa zuru oke nke nwere ụdị ntuli aka nke ndị America niile. Ansolabehere na Hersh na otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a na-akpakọrịta-Catalist LCC-ka ha jiri akara nnabata nna ha ukwu nyere aka ịmepụtawanye foto nke ndị a na-ahọpụta. Ọzọkwa, n'ihi na ọmụmụ ihe ha dabeere na ihe ndekọ dijitalụ nke anakọtara ma gwọọ ya site na ụlọ ọrụ nke tinyere ego dị ukwuu na nchịkọta data na nkwekọrịta, o nyere ọtụtụ uru karịa mgbalị ndị gara aga nke emeghị na enyemaka nke ụlọ ọrụ na site na iji ndekọ akọrọ.
Dị ka ọtụtụ n'ime isi data dị na isi nke abụọ, akwụkwọ nnabata Catalist adịghị agụnye ọtụtụ n'ime ozi igwe mmadụ, ihe gbasara agwa, na omume nke Ansolabehere na Hersh chọrọ. N'ezie, ha nwere mmasị karịsịa n'ịtụle omume ịgba akwụkwọ na-akọ na nyocha na njirimara ịme ntuli aka a kwadoro (ya bụ, ihe ọmụma na nchekwa data Catalist). Ya mere, Ansolabehere na Hersh chịkọtara data ha chọrọ dịka nnukwu nnyocha gbasara mmadụ, CCES, bụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ n'isiakwụkwọ a. Mgbe ahụ, ha nyere Catalist ihe ọmụma ha, Katalist nyeghachikwara ha faịlụ data jikọtara gụnyere njigide ntuli aka (site na Catalist), omume onwe onye na-akọ banyere onwe ya (site na CCES) na nchịkwa na àgwà nke ndị zara (site na CCES) (ọgụgụ 3.13). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Ansolabehere na Hersh jikọtara data ndekọ ntuli aka na data nyocha iji mee nchọpụta nke na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na esi na data nweta otu.
Ihe odide nke 3.13: Usoro ihe omumu nke Ansolabehere and Hersh (2012) . Iji mepụta data master data, Catalist na-agwakọta ma na-eme ka ozi dị iche iche site na ọtụtụ isi mmalite. Usoro a nke ijikọta, n'agbanyeghị agbanyechara nlezianya, ga-agbagha njehie na isi mmalite data ma mee ka njehie ọhụrụ pụta. Isi nke abụọ nke njehie bụ njikọ njikọ n'etiti data nyocha na nnabata datafile. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ebe obibi, ihe nchọpụta pụrụ iche na ma data data, mgbe ahụ, njikọ agaghị adị ntakịrị. Ma, Catalist aghaghị ime njikọ ahụ site na iji njirimara ezughị okè, aha a, okike, afọ ọmụmụ, na adreesị ụlọ. O di nwute, n'ihi na otutu okwu enwere ike inwe ezughị oke ma obu bu eziokwu; onye omeiwu a na-akpọ Homer Simpson nwere ike ịpụta dị ka Homer Jay Simpson, Homie J Simpson, ma ọbụ ọbụna Homer Sampsin. N'agbanyeghị na njehie dị na Catalist master datafile na njehie dị na ndekọ ndekọ ahụ, Ansolabehere na Hersh nwere ike ịmalite inwe obi ike na atụmatụ ha site na iche iche nyocha.
Na faịlụ ha jikọtara, Ansolabehere na Hersh bịara nchịkọta dị mkpa atọ. Nke mbụ, ihe karịrị nchịkọta nke ịme ntuli aka jupụtara: ihe fọrọ nke nta ka ọkara nke ndị na-abụghị ndị na-ekwu okwu na-atụle ntuli aka, ma ọ bụrụ na mmadụ kwuru na ị na-eme ntuli aka, enwere 80% ohere ha mere n'ezie. Nke abụọ, ịghaghị ịkọ akụkọ abụghị ihe ọghọm: ịkọ ihe karịrị otu n'ime ndị na-akwụ ụgwọ dị elu, ndị gụrụ akwụkwọ, ndị na-etinye aka na ọha na eze. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị mmadụ nwere ike ịme ntuli aka ga-ekwukwa banyere ịlụ ntuli aka. Nke atọ, na nke kachasị njọ, n'ihi ọdịdị nke usoro ịkọ akụkọ, ọdịiche dị n'etiti ndị nhoputa ndi ochichi na ndị na-abụghị ndị ọzọ dị ntakịrị karịa ka ha na-apụta nanị site nyocha. Dịka ọmụmaatụ, ndị nwere akara mmụta nke bachelor dị ihe dị ka pasent 22 pasent ka ha na-akọ akụkọ ntuli aka, ma ọ bụ naanị pasent 10 nke kachasị na ọ ga-abụrịrị na ha ga-eme ntuli aka. O doro anya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na usoro ndị ahụ dị na ntụrụndụ nke ntuli aka dị mma karịa ịkọ onye ga-akọ akụkọ ntuli aka (nke bụ data ndị na-eme nchọpụta jirila n'oge gara aga) karịa na ha nọ na-ebu amụma onye ga-emeri. N'ihi ya, nchọpụta siri ike nke Ansolabehere and Hersh (2012) akpọ maka echiche ọhụrụ iji ghọta na ịkọ ntuli aka.
Mana ole ka anyị kwesịrị ịtụkwasị obi na nsonaazụ ndị a? Cheta, ihe ndị a na-adabere na njehie-na-ejikọta na data nchekwa ojii na-amaghị ama. Karịa nke a, ihe ndị a na-arụpụta na ụzọ abụọ dị mkpa: (1) ikike nke Catalist iji jikọta ọtụtụ isi data iji nweta ezi data datafile na (2) ike nke Catalist iji jikọọ data nyocha ya na data master ya. Nke ọ bụla n'ime usoro ndị a siri ike, na njehie na nzọụkwụ ọ bụla nwere ike iduga ndị nchọpụta na nkwubi okwu ọjọọ. Otú ọ dị, ma nhazi data ma njikọ dị oké mkpa maka ọdịdị nke Catalist dịka ụlọ ọrụ, n'ihi ya, ọ nwere ike itinye ego iji dozie nsogbu ndị a, ọtụtụ mgbe n'ọtụtụ na ọ dịghị onye na-eme nchọpụta nwere ike ijikọ. N'akwụkwọ ha, Ansolabehere na Hersh na-agafe ọtụtụ nzọụkwụ iji chọpụta ihe abụọ a-ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị kwesịrị ekwesị-na akwụkwọ ego ndị a nwere ike inye aka maka ndị nchọpụta ndị ọzọ na-achọ ijikọ data nchọpụta na igbe nnukwu data isi mmalite.
Kedu ihe ndị ọkachamara n'ozuzu ha nwere ike isi nweta ọmụmụ ihe a? Mbụ, enwere nnukwu uru ma ọ bụrụ na ị nweta nnukwu data data na data nyocha na site na ịmepụta data nyocha na nnukwu data data (ị nwere ike ịhụ ọmụmụ a ma ọ bụ ụzọ). Site na ijikọta isi mmalite data abụọ a, ndị nchọpụta ahụ nwere ike ime ihe na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ n'otu n'otu. Ihe omumu nke abuo bu na obu ezie na achikota, isi ihe omuma ahia, dika data sitere na Catalist, agagh ewere ya dika "ala eziokwu," na ufodu, ha nwere ike bara uru. Mgbe ụfọdụ, ndị na-atụ ụjọ na-atụnyere ihe ndekọ data a, juputara na azụmahịa na Eziokwu zuru oke ma kwuo na isi mmalite data a adaghị. Otú ọ dị, na nke a, ndị na-arụ ụka na-eme ihe atụ na-ezighị ezi: data niile ndị na-eme nchọpụta na-ejighi Eziokwu zuru oke. Kama nke ahụ, ọ ka mma iji tụnyere isi data data na-ejikọta ya, na ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta data (dịka ọmụmaatụ, na-egosi na ịme ntuli aka), nke nwekwara njehie. N'ikpeazụ, nkuzi nke atọ nke Ansolabehere na nke Hersh bụ na n'ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịrite uru site na nnukwu ụlọ ọrụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme n'ịchịkọ ma na-eme ka usoro ihe ọmụma dịgasị iche iche dị.